Filoha Hery Rajaonarimampianina:“ IZAY NAMPANANTENAIKO TSY MAINTSY TANTERAHAKO ” -
AccueilRaharaham-pirenenaFiloha Hery Rajaonarimampianina:“ IZAY NAMPANANTENAIKO TSY MAINTSY TANTERAHAKO ”
Tsy ny fisian’ny mpanenjika no tsy hanatanterahana ny asa raha ny nambaran’ny Filoha nandritra ny kabariny omaly tetsy Andohatapenaka. Asa fanasoavana ny firenena no atao, ary ny vahoaka no atao laharam-pahamehana amin’ny asa rehetra atao. Tsy miteny an-databatra fotsiny ny Filoha fa manatanteraka ny asa nampanantenainy. “Tsy maintsy vita ny asa rehetra nampanantenaiko” hoy ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina. Hiatrika ny Frankofonia isika manomboka ny Alatsinainy ho avy izao, handray ireo vahiny manan-kaja maro avy amin’izao tontolo izao. Niaraha-mahita ny fanakorontanana maro noezahin’ireo mpibodo seza natao mba hanakatsakanana ny fotoana goavana. Tonga anefa izy izao ary vonona ho amin’ny fiatrehana izany isika. Fotodrafitrasa maro no natsangana hiatrehana io fotoan-dehibe izay hitondra tombontsoa goavana ho an’ny firenena malagasy. Tombontsoa mielipatrana amin’ny sehatra maro, ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fampiroboroboana ny ara-toekarena.
Hanamora ny fifamezivezena eto an-drenivohitra sy hanamaivana ny fahasahiranam-bahoaka ireo lalana maro natsangana. Tsy mijanona hatreo izay fananganana lalana lehibe izay fa hitohy mankany amin’ny toerana maro manerana ny renivohitra sy ny faritra maro eto Madagasikara. Ho an’Antananarivo, dia hipaka hatrany Avaratra ny fanitarana sy fanatsarana ny lalana hifamezivezena, any amin’ny manodidina Ivato rehetra any. Hisy ihany koa ny fanamboarana lalana mampitohy an’i Marais Masay-Ampasampito-Bypass. Ankoatra ireo dia anisan’ny hitondrana fanavaozana ihany koa ireo lakandrano eto amintsika. Efa betsaka ireo vita ary tohizana hatrany ny asa atao mba ho tombontsoan’ny firenena mivantana. Manana ny ampy isika ahatonga antsika ho firenena mandroso ary izay no tanjona raha ny nambaran’ny filoham-pirenena, Hery Rajaonarimampianina. Mitodika aty Madagasikara ny mason’izao tontolo izao ankehitriny, mandroso miaraka isika ary tsy miverin-dalana intsony. Maro ireo asa mbola hotanterahina, ary be no efa vita. Mihaino ny fahasahiranan’ny vahoaka ny Filoha, ary mitady vahaolana entina hanamaivanana ny fahasahiranan’ny vahoaka malagasy tsy vaky volo.
Voatery nandositra niala an’i Madagasikara ilay tompon’ny orinasa fitaterana iray taorian’ny fanodinkodinam-bary aman-jato taonina tao amin’ny BNGRC. Ny antony, matahotra ny ainy izy araka ny vaovao azo satria lasa vavolombelona tsy fidiny teo anatrehan’ny zava-nitranga. ...Tohiny